LibreOffice inosvika kuFlathub repository mu flatpak fomati | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice inosvika kuFlathub repository mu flatpak fomati
Joaquin Garcia | | Zvirongwa
Kuti zvinowanda uye zvakawanda Gnu / Linux zvirongwa zviri kutora iyo Flatpak fomati, haisi nhau, asi kuti izvi zvinosvika kune ekunze marekodhi, ndizvo. Kuita kuti iwedzere kuve nyore kuwana yazvino vhezheni yechirongwa pasina kumirira kune vanogadzira ekugovera.
Chirongwa chazvino chekuita izvi chave LibreOffice. Iyo Hofisi yepasirose inozivikanwa kwazvo Gnu / Linux ikozvino iri muFlatpak fomati uye munguva pfupi yapfuura yakazvigovera munzvimbo inozivikanwa yekuchengetedza yemapakeji muFlatpak fomati, Flathub.
Kuuya kweLibreOffice kuFlathub kunoita kuti isu tive neazvino vhezheni yeiyi suite pasina matambudziko nekuparadzirwa
Iyi repository ichatibvumidza isu kuti tiise yazvino vhezheni yeLibreOffice mukugovera kwedu uye nekuona kuti tinogara tichiwana zvekupedzisira kubva kuhofisi suite tisingave nematambudziko nemamwe mapakeji kana kutsamira. Nehurombo, iyi pasuru uye repository zvinongopindirana nezvipatsanuro zvine flatpak rutsigiro. Zvese iwo kugoverwa uko kusimudzira kuri kuenderera kuve nerutsigiro rwemhando iyi yemafomati; kugovera kwekare kana shanduro dzekare dzeizvi kazhinji hazvitsigire. Chero zvazvingaitika, mune izvi chinyorwa Isu tinovimba kuve nerutsigiro rweFlatpak.
Kana tangova neizvi, tinoenda kunzvimbo yekugovera uye tinyore zvinotevera:
Izvi zvinowedzera iro Flathub repository muFlatpak package maneja, akadai izvo pese patinoisa chirongwa mune ino fomati, pakuzviparadzira icho chinotsvaga nekuisa zvirongwa kubva kune ino repository. Sezvo Flathub iine LibreOffice, zvinongokwana kuisa Libreoffice neFlatpak chishandiso.
Chokwadi vazhinji venyu masarudza iyo snap fomati uye vamwe vanoenderera neiyo flatpak fomati, zvisinei, mune chero mamiriro ezvinhu zvinoita sekunge universal package fomati ndeye ramangwana revashandisi vazhinji uye akawanda akaparadzirwa Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » LibreOffice inosvika kuFlathub repository mu flatpak fomati
Warhammer 40.000: Gladius Yakaziviswa yeGNU / Linux
ARK: mutambo wevhidhiyo unogashira kuwedzerwa muna Zvita